शुभबिहानी ! आजको राशिफल र चियाका १० फाइदाहरु पढौँ | NewsSudur
शुभबिहानी ! आजको राशिफल र चियाका १० फाइदाहरु पढौँ
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । प्रतिष्ठित काम गरेर अवसर हात पार्ने समय छ । जोश जाँगर र उमंग बढ्ला ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) नियमित काममा दाजुभाई तथा आफन्तको सहयोग हुने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ । आज भाग्यले साथ दिनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेलाछ । सफल र माइलो यात्राको योग रहेको छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) विद्या तथा प्रतिस्पर्धिहरू हार खानेछन् भने तपाईको कुरा काट्नेहरुलाई पाठ सिकाउन सकिनेछ । परिवारका साथ रमाइलो वातावरण तथा हासखेलमा समय बित्नेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । साथी भाईको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) चुनौतीपूर्ण कामको दायित्वले कठोर निर्णय गराउन सक्छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ । प्रेममा मनमुटावका साथै मनमा सङ्का उत्पन्न हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)साथीभाई तथा आफन्तहरुको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आएपनि फाइदाको लागि अलि बढि मेहनत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या आउने भएपनि दैनिक काम गर्न गाह्रो हुने छैन । राज्यबाट मान सम्मान पाइनेछ । कुटुम्बको सहयोग मिल्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) दाजुभाई वा अग्रजहरुको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ । विद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाई लेखाइमा मन जानेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । नजिकको व्यक्तिबाट सहयोग पाईनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) आत्मिय मित्र तथा आफन्तका साथ रमाइलो यात्राको सम्भावना देखिन्छ । काम गर्ने जोश, जाँगर र आत्मबल बढ्नेछ । न्यायिक काममा भएको उल्झन बिस्तारै हराउँदै जानेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले आफन्त तथा अग्रजहरुको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा सुगम स्थानमा स्थानात्तरणको बलियो सम्भावना रहेकोछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पति दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउँनेछ । समय तथा परिस्थिति अनुसार नचल्नाले दुख पाइनेछ । सामान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) सामान्य स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउनेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउदा ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) लामो दुरिको अफिसियल यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ भने यात्राबाट भनेजस्तो उपलब्धि हात पर्ने ग्रहयोग रहेकोछ । वादविवाद तथा मुद्दा मामिलामा प्रतिस्पर्धिहरूलाई हराउँदै जित निकाल्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपाईको नाम रहेनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) बौद्धिक साहित्य तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रबाट नाम तथा दाम दुवै कमाउने समय रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा मन परेका मानिसबाट उपाहार प्राप्त हुने योग रहेकोछ । आफन्त तथा छोराछोरी सँगको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ ।
चियाको अम्मलीहरुलाई सबैभन्दा मनपर्ने पेय पदार्थनै चिया हो । जुनै मौसममा पनि चिया धेरैले मनपराउँछन् । गर्मीमा कसैले आइस मिसाएर पनि चिया पिउने गरेका छन् । चियाले मुडलाई फ्रेस बनाउने मात्रै होइन यसका धेरै स्वास्थ्य फाइदाहरु पनि छन् ।
विभिनन अनुसन्धानले चिया पिउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक भएको पुष्टि गरिसकेको छ । दिनको एक वा दुई कप चियाले स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा गर्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । दाँत जोगाउन र मुटुकालागि चियाले फाइदा पुर्योउँछ । क्यान्सरको जोखिम रोकथामका लागि पनि चियाले सहयोग गर्छ ।
तर, चियाका पनि प्रकारहरु हुन्छन् । प्रकार अनुसार फाइदाहरु फरक हुन्छ । नन–हर्बल चिया चियाको पत्तिबाट बनाइन्छ । यस्तै हर्बल चियाहरु विभिन्न जडिबुटीबाट बनाइन्छ । ग्रिन, ब्ल्याक वा दूध चियाको रुपमा बनाएर पिउने गरिन्छ ।
चियाबाट स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु
१) एन्टीअक्सिडेन्ट्सले हाम्रो शरीरलाई रिफ्रेस बनाउन सहयोग गर्छ । प्रदुषणबाट हुने नोक्सानी कम गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ । एन्टीअक्सिडेन्ट्स दूध चियामा बढी हुन्छ ।
२)चियामा कफीमा पाइने भन्दा ५० प्रतिशतसम्म कम क्याफिन पाइन्छ । अझ हर्बल चियामा त क्याफिनको मात्रा शून्य प्रायः हुन्छ । यसको अर्थ क्याफिनका कारण नर्भस सिस्टममा हुने प्रभाव चियाका कारण हुँदैन ।
३)चिया र मुटु स्वास्थ्यका बारेमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् । केहीमा चियाले बेफाइदा गर्ने बताइएको छ भने केहीमा फाइदा हुने देखिएको छ । तर पछिल्ला अध्ययनले चियाको व्यवस्थित मात्राले हृदयघात तथा स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न सक्ने देखिएको छ ।
४) अध्ययनको निष्कर्ष त्यति पूर्ण छैन, तर चियाले मोटोपन कम गर्न सहयोग गर्ने धेरै अध्ययनले देखिएका छन् ।
५)ग्रिन टि ले हड्डीको क्षतिकरणमा सहयोग गर्ने पछिल्लोपटक जनावरमा गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । ग्रिन टि मा क्याल्सियम, आइरनसहित भिटामिन ए र के हुने भएकाले हड्डीका लागि राम्रो हुने देखिएको हो ।
६) जापानमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार चियाले दाँत खिइने क्रम कम गर्ने र झर्नबाट पनि जोगाउने देखिएको छ । चियाले मुखको पिएच बढाउँछ । यस्तै चियाले दाँतलाई चम्किलो राख्न पनि सहयोग गर्छ ।
७) चियाले शरीरमा रहेका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कोषहरुको सिर्जनामा सहयोग गर्ने देखिएको छ । यस्तै ती कोषहरुको क्षमता पनि बिस्तार हुने गरेको पाइएको छ ।
८) अध्ययनका नतिजाहरु मिश्रित आएका छन् । तर चियाले क्यान्सरको जोखिम कम गर्न अधिकांश अध्ययनले देखाएका छन् । विशेष गरी वंशाणुगत कारणले क्यान्सरको जोखिममा रहेका व्यक्तिले चियाको मात्रा बढाउँदा फाइदा हुने देखिएको छ ।
९)विशेष गरी हर्बल चियाले पाचन प्रक्रिया बलियो बनाउन सहयोग गर्ने देखिएको छ । अदुवा मिसाएको हर्बल चियाले पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्ने देखिएको छ ।
१०) चिया क्यालोरी मुक्त र पानीको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पानीको मात्रा कम हुन पनि नदिने र स्वाद पनि आउने भएकाले चिया पेयको उपयुक्त विकल्प हो ।